प्रहरीले घेरा हालेर ट्रक चालकमाथि २ राउण्ड गो’ली चलायो, के छ अवस्था ? — Sanchar Kendra
प्रहरीले घेरा हालेर ट्रक चालकमाथि २ राउण्ड गो’ली चलायो, के छ अवस्था ?
हेटौंडा । मकवानपुरमा प्रहरीले दुई रा’उ’ण्ड गो’ली हानेर एक ट्रक चालकलाई गाँजासहित प’क्रा’उ गरेको छ । मंगलबार मध्यरातमा हेतौँडाबाट वीरगञ्ज जाँदै गरेको ना ६ ख १३१ नम्बरको ट्रकमार्फत जाँजा तस्करी भइरहेको सूचनााका आधारमा सो ट्रकमाथि चेकजाँच हुँदै थियो। पूर्वपश्चिम राजमार्गको हेटौंडा–१५ रातोमाटे पोष्टमा चेकजाँचका लागि चढेका प्रहरी जवान सञ्जीवकुमार दासलाई ट्रकबाट झर्नै निदई लिएर भागेपछि प्रहरीले ट्रकका चालक पर्सा वीरगन्ज महानगरपालिका–२९ का ३५ वर्षीया अफ्रिका चौधरीलाई दुई राउन्ड गो’ली हानेर नियन्त्रणमा लिएको हो।
प्रहरीले चौधरीलाई नियन्त्रणमा लिँदा उनको देब्रे खुट्टामा दुई राउण्ड गो’ली प्रहार गरेको मकवानपुरका प्रहरी उपरिक्षक मुकेश सिंहले बताए । हेटौंडाबाट पथलैयातर्फ जाँदै गरेको ना ६ ख १३१ नम्बरको ट्रकबाट प्रहरीले १४ पोका गाँजा बरामद गरेको छ । ७८ किलो ८०० ग्राम गाँजासहित पक्राउ परेका चौधरीलाई प्रहरीले हेटौंडा अस्पतालमा उपचार गराइरहेको छ । ट्रकमा रहेका अर्का एक ब्यक्ति भने फरार रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
पक्राउ परेका चौधरीमाथि अनुसन्धान भइरहेको र फरार रहेका अभियुक्तको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ परेका चौधरीलाई लागु औषध नियन्त्रण ऐन २०३३ अनुसार जिल्ला अदालत मकवानपुरबाट म्याद थप गरिएको छ । उक्त ऐनअनुसार २ बर्ष देखि १० बर्ष कैद र १५ हजा देखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
त्यस्तै नेपाल प्रहरी र रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय समिति (आईसीआरसी)को संयुक्त आयोजनामा काठमाडौंमा एसिया प्रहरी सम्मेलन शुरु भएको छ । नेपालसहित १५ एसियाली देशहरुका २५ जना वरिष्ठ प्रहरी अधिकारीहरु सम्मेलित उक्त सम्मेलनको प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले मंगलबार उद्घाटन गरे । ३ दिनसम्म चल्ने उक्त सम्मेलनमा दण्डहिनता तथा सुरक्षा चुनौती, आतंकवादविरुद्ध लड्न सुरक्षा संगठनहरुबीच समन्वयका विषयमा छलफल हुने जनाइएको छ । उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै प्रहरी महानिरीक्षक खनालले सम्मेलनमार्फत समकालीन सुरक्षा चुनौतीको पहिचानका विषयमा मद्दत मिल्ने बताए ।
यस्तै स्वच्छ मासु खान भनेर जारी गरिएको एउटा सन्देशमूलक विज्ञापन पोस्टरमा गाइको तस्वीर समावेश गरिएको विषयमा सरकारले क्षमा याचना गरेको छ । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय मातहतको पशु सेवा विभागले एक सूचनामार्फत छपाईको त्रुटीका कारण स्वच्छ मासुको प्रयोगबारे प्रचार गर्न बनाइएको विज्ञापन पोस्टरमा गाईको तस्वीर समावेश हुन गएको भन्दै माफी मागेको हो । विभागका महानिर्देशक डा. वंशी शर्माले सूचनामार्फत उक्त विज्ञापन सन्देशबारे क्षमा याचना गरेका छन् ।
पशु सेवा विभागअन्तर्गतको पशु आहारा तथा लाईभष्टक गुण व्यवस्थापन प्रयोगशाला, हरिहरभवन ललितपरको बा २ झ ३८११ नम्बरको गाडी (मोबाइल भ्यान)मा टाँसिएको एउटा विज्ञापनको विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना भएको थियो । ‘बधशालादेखि भान्सासम्म, स्वच्छ र स्वस्थ मासु’ लेखिएको उक्त विज्ञापन सन्देशमा गाईको फोटो समेत राखिएको थियो । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुले उक्त पोस्टरमा गाईको तस्वीर राख्ने र पोस्टर स्वीकृत गर्ने सबैलाई कारबाही हुनुपर्ने माग गरेका थिए । सामाजिक सञ्जाल प्रयोकर्ताहरुको भनाइ थियो, ‘यस्तो पोस्टरमा गाईको तस्वीर राख्दा सरकारले नै गाई काटेर मासु खानुहोस् भनेर प्रचार गरिरहेको जस्तो सन्देश गइरहेको छ ।’ पशु सेवा विभागका निर्देशक शर्माले जारी गरेको सूचनामा भने उक्त त्रुटी सच्याइएको जनाइएको छ ।
काठमाडौंका घरबेटी घर छाडेर जानेबेला प्रहरीलाई खबर गर्नुपर्ने
दशैं, तिहार तथा छठ मनाउनका लागि काठमाडौंको घर छाडेर पुर्ख्यौली घर जाँदा घरमा चोरी लगायतका घटना हुने भएकाले सबै घरधनीहरुले आफूहरुलाई घर छाडेर गएको जानकारी दिन प्रहरीको अनुरोध छ । साथै, घरमा काम गर्ने कामदार र सुरक्षाका लागि खटाइएका व्यक्ति (सुरक्षा गार्ड)बारे पनि प्रहरीलाई जानकारी दिन प्रहरीले अनुरोध गरेको छ ।
दशैं, तिहार र छठ पर्वका बेला प्रहरीका लागि काठमाडौं प्रहरीले छुट्टै सुरक्षा योजना लागू गर्ने भएको छ । उक्त सुरक्षा योजनाअन्तर्गत नियमितभन्दा २५ प्रतिशत बढी प्रहरी जनशक्ति परिचालन हुनेछन् । ‘चाडपर्वका बेला हामीले नियमित प्रदान गरिरहेको जस्तै सुरक्षा प्रदान हुन्छ । तर, परिचालनको अवस्था भने अलि फरक हुन्छ,’ काठमाडौं प्रहरी प्रमुख सुवेदीले भने, ‘हामीले लामो अध्ययन र अनुसन्धान गरेर सुरक्षाका दृष्टिकोणले संवेदनशील क्षेत्र पहिचान गरेका छौं । जहाँ हाम्रो विशेष निगरानी हुन्छ ।’
दशैंका बेला हुनसक्ने संभावित घटनाका लागि सादा पोसाकमा पनि प्रहरी परिचालन हुने एसएसपी सुवेदीको भनाइ छ । यस्तो टोलीले संकलन गरेको सूचनाको विश्लेषण गरेर पनि ‘तत्कालीन सुरक्षा रणनीति’ बनाइने एसएसपी सुवेदीको भनाइ छ । सूचना संकलनका लागि ७० जना प्रहरीलाई सादा पोषाकमा खटाइने एसएसपी सुवेदीले जानकारी दिए । सुवेदीका अनुसार सादा पोषाकमा खटिने प्रहरीले दिएको सूचनाका आधारमा संभावित घटना रोक्नका लागि प्रहरीको विशेष टोली परिचालन हुने छ ।
संभावित घटना नियन्त्रणका लागि ‘सिल एण्ड सर्च’, ‘कर्डन एण्ड सर्च’, ‘एम्बुसिङ र निगरानी’, ‘डग सिफ्टिङ’, ‘स्ट्राइकिङ’, ‘क्यूआरटी’ र ‘नाकाबन्दी’ गर्ने टोली परिचालन हुने छ । काठमाडौं प्रहरीले ‘सिल एण्ड सर्च’ अपरेशनका लागि ३० जना, ‘कर्डन एण्ड सर्च’ अपरेशनका लागि ३०, ‘एम्बुसिङ र निगरानी’ अपरेशनका लागि ३०, ‘डग सिफ्टिङ’ अपरेशनका लागि ७, ‘स्ट्राइकिङ’का लागि ३, ‘क्यूआरटी’ हतियारसहित मोटरसाइकल गस्तीका लागि ५३ र ‘नाकाबन्दी’का लागि २५ जनालाई तयारी अवस्थामा राखिने जनाएको छ ।